Mareykanka oo sheegay in uu taageero u fidinaayo qoysaska dadkii ku dhintay duqeyntii Kaabuul - Idman news
Mareykanka oo sheegay in uu taageero u fidinaayo qoysaska dadkii ku dhintay duqeyntii Kaabuul
Waaxda Difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa dhambaal tacsi ah iyo lacago aan la cayimin gaarsiisay qoysaska 10-qof oo rayid ah oo ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo Mareykanka bishii Agoosto ee la soo dhaafay uu ka geystay Magaalada Kaabul ee dalka Afgaanist.
Waaxda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay inay jiraan ballanqaad ay ka mid yihiin bixinta lacago Magdhaw ah iyo in Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ay ka shaqeyneyso sidii xubnaha qoyskan ee danaynayay inay u guuraan Mareykanka looga tageeri lahaa.
Xafiiska Pentagoonka ayaa sheegay in dadkii ku dhintay duqeyntii Kaabul ee 29-Agoosto ay ahaayeen dhibbanayaal aan waxba galabsan, isla markaana aan xiriir la lahayn kooxda sheegato Dawladda Islaamiga ah ee Gobolka Khorasa.
Duqeeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka sameyeen Kaabuul ayaa lagu dilay ilaa 10 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 7 carruur ah.
Pentagon-ka ayaa horay u sheegay in weerarkii 29-kii bishii August lala beegsaday kooxo mitidiin ah oo halis weyn ku ahaa ciidammada uu hoggaaminayo Mareykanka ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha Kaabuul, xilli ay socdeen dhamaystirka marxaladihii ugu dambeeyay ee ka bixitaanka Afghanistan ee Ciidamada shisheeye.
Previous articleSoomaaliya iyo Thailand oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal
Previous Soomaaliya iyo Thailand oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal
Next Xaalad cabsi ah oo ka jirto Guriceel iyo Inta badan goobihii ganacsiga oo xiran. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
6 Xubnood oo Gole Dhexe & Gudi Fulin ah oo ONLF ayaa Xabsi ku jira , oon ila…
33 seconds ago Mohamoud
Markabkii ugu horeeyay ayaa kusoo xirtay dekedda Garacad saaka. Abdirahman Buls…
Maxamed Cali Xasan ayaa ku guuleystey Kursiga Nambarkiisa uu yahay Hop 103 ee Go…
Beelweynta Dagoodiya ayaa maanta Soo xulatay Halima Daud Ahmed in ay uloolanto k…
6 Xubnood oo Gole Dhexe & Gudi Fulin ah oo ONLF ayaa Xabsi ku jira , oon ila… November 28, 2021
Markabkii ugu horeeyay ayaa kusoo xirtay dekedda Garacad saaka. Abdirahman Buls… November 28, 2021
Maxamed Cali Xasan ayaa ku guuleystey Kursiga Nambarkiisa uu yahay Hop 103 ee Go… November 28, 2021
Beelweynta Dagoodiya ayaa maanta Soo xulatay Halima Daud Ahmed in ay uloolanto k… November 28, 2021
Omicron symptoms mild so far, says South African doctor who spotted it November 28, 2021